KITRA : Handrangotra voasary "Pamplemousse Fc" avy atsy Maorisy ny Fosan’i Boeny
Ny sabotsy 10 aogositra ho avy izao no handray ity lalalo iraisam-pirenena savaranonando voalohany lalao mandroso eo aminy fiadiana izay tompon’amboara ny Afrika, ho an’ny tarika tompondaka ny ao aminy kianjan’i Alexandre Rabemananjara. 18 octobre 2019
Lalao izay hifanindrinan’ny Fosa junior sy ny Fc Pamplemousse avy atsy Maorisy, hanomboka aminy 2ora sy 30 minitra, ora eto an-toerana. Endrika vaovao ho an’ny mpitia ny kitra eto Mahajanga no ahitana ny Fosa junior manomboka amin’io lalao atao ny sabotsy ho avy io, satria dia efa tonga eto Mahajanga tamin’iny alatsinainy 05 aogositra teo ry Baggio sy ny namany telo mirahalahy voatsonga nandrafitra ny ekipam-pirenena Barea tany Maozambika, ny farany herinandro lasa teo.
Misy koa ireo mpilalao vaovao voantso hanatevindaharana an’ity ekipa ny Fosa ity, dia i Eliot mpilalao misalotra ny fanamiana laharana fahafolo tao aminy ekipan’ny Zanakala. Mpanazatra vaovao no hitarika ny Fosa junior amin’io lalao atao ny sabotsy hoavy io, dia i Tity Rasoanaivo, izay nilaza fa tsy handiso fanantenana ny mpitia ny kitra eto Mahajanga ireo mpilalao tantanany mandritra io lalao aminy sabotsy ho avy io.
Ho an’ny ekipa ny voasary "Pamplemousse F.C" kosa dia efa nisalotra ny tompondakan’i Maorisy inenina, dia ny taona 2006- 2010- 2012-2017-2018, ary tamin’ity taona 2019 ity, izay nahatafakatra azy tamin’izao fifaninanana iraisam-pirenena izao. Tompondaka lefitra tao Maorisy kosa ry zareo, ny taona 2009- 2016- ary ny 2018, raha nandrombaka ny fiadiana ny amboaran’ ny filoha Maorisianina ny Paplemousse Fc tamin’ny taona 2010 sy ny 2011. I Henri Speville, no hitarika ny delegasiona Maorisianina hanafika aty amintsika ny sabotsy ho avy izao, izay sady mpanazatra an’ireto "Fc Pamplemousse" ireto.
Handrangotra voasary izany ny Fosa amin’io sabotsy ho avy io, ka niantso ireo mpitia ny baolina kitra eto Mahajanga mba ho tonga maro hanohana sy hanome hery azy ireo mandritra io lalao atao io . Salama tsara izy 23 mirahalahy voantso handrafitra ny Fosa Junior, izay ahitana ireo mpilalao efatra vao avy nandrafitra ny Barean’i Madagasikara nandritra ny fiadiana ny "Chan" na ny tompondakan’i Afrika tsy misy mpila ravinahitra natao tany Maozambika farany teo, dia i Din, i Baggio, i Eliot ary i Da Hery, izay efa tonga eto Mahajanga avokoa amin’izao fotoana izao.
Araka ny fandaminana natao dia avy any aminy vavahady ambony no fidirana amin’izany tapakila voatokana na ny tribune afovoany. Nahitam-piakarana io fidirana ao aminy kianja Rabemananjara io raha mitaha tamin’ireo lalao rehetra nisy tao hatramin’izay, noho ny fandaniana be loatra, handraisana io lalao iraisam-pirenena io, hoy i La Cole sy i Mily ary i Evline, mpanentana ny mpankafy ny Fosa. Saingy tsy tokony hatao ho sakana izany hoy hatrany ireto tompon’andraikitra ireto. Izay sady nanentana ny fahatongavan’ny rehetra mba hanohana ity ekipa hany tokana nanamborana hiaro ny voninahitra ny faritra Boeny ity. Toy izao ny saram-pidirana : ny vavahady any ambany sandaina amin’ny vidiny 5 000 Ariary ny tapakila, raha 3 000 Ariary izany teo aloha, ary 10 000 Ariary kosa ny fidirana eny aminy toerana voatokana.
Izahay eto aminy sampana fanoratana "Ino Vaovao Mahajanga" ihany koa dia efa mirary soa sy fahombiazana sahady ho an’ny Fosa amin’io lalao mandroso atao ny sabotsy faha 10 aogositra ho avy izao. Raha any Maorisy kosa no hatao ny lalao miverina ho an’ireto tarika tompondakan’ny fireneny roa tonta ireto, aorian’io lalao savaranonando mandroso io.